राष्ट्र बैंकद्वारा प्रभु बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर २१ गते प्रभु बैंकलाई प्रस्तावित लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाएसँगै अब प्रभु बैंकले आफ्नो आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश अनुमोदन गर्दै सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्नेछ।
प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ११ अर्ब ३४ करोड ७० लाख ५७ हजार २९९ रुपैयाँको कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश रहेका छन्।
prabhu bank limited Dividends
एनआईसी एशिया बैंकका यी शाखा र विस्तारित काउन्टरहरु आजबाट बन्द
काठमाण्डौ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका...
पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ८७ अर्बले बढ्यो, रु. ५९
काठमाण्डौ । पुस महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी...
मर्जर भाँडिएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विशेष साधारणसभा रद्द
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो विशेष...
आज एकैदिन ५ वाणिज्य बैंकसहित २२ कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा
काठमाण्डौ । आज पुस ३० गते एकैदिन ५ वटा वाणिज्य बैंकसहित २२ वटा...
नबिल बैंकले गर्यो एनबीलाई रु. ४२ मा गाभ्ने प्रारम्भिक सम्झौता
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभ्नका लागि...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ३३%
काठमाण्डौ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको १६ औं वार्षिक...
एनसीसी बैंकको एजीएमबाट लाभांश पारित, चुक्तापुँजी रु. ११.१३
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडको २४ औँ...
कृषि विकास बैंकको एजीएमबाट २०% बोनस सेयर पारित
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडको आज सम्पन्न १५ औँ वार्षिक...